FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ENGAM BULLDOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika EngAm Bulldog
Alika mpihetsiketsika Bulldog amerikana bulldog anglisy
Ity no zanako kely Engam antsoina hoe Chico amin'ny 5 volana milanja 40lbs. Izy no taranaka voalohany. Ny reniny American Bulldog sy ny rainy English Bulldog . Nahazo azy aho nandritra ny 2 volana rehefa nilanja 6.5lbs fotsiny.
Bulldog Amerikanina anglisy
Bulldog Amerikanina taloha
Ny alika EngAm Bulldog dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny American Bulldog ary ny English Bulldog . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Bulldog Amerikanina taloha
Gunner ny antsasaky ny Bulldog amerikana / antsasaky ny anglisy Bulldog alika mifangaro amin'ny 7 taona
'Ity no Bucksnort II-a Stitch in Time, izay antsoina matetika hoe Stitch. Stitch dia Bulldog anglisy / Amerikanina. Ny reniny dia Bulldog anglisy fotsy, ary ny rainy dia Bulldog amerikana fawn. 1 taona sy 6 volana izy amin'ity sary ity, milanja 60 lbs. ary mijoro 16 santimetatra eo an-tsorony. Stitch, toy ny ankamaroan'ny Bulldogs, dia tena maditra sy mafy loha. Raha omenao iray santimetatra izy dia antenao fa hoentina iray kilaometatra ianao. Nahazo an'i Stitch aho tamin'izy 12 herinandro teo ho eo ary izy no alika mahatsiravina indrindra sendra ahy, saingy miaraka amina fotoana be sy fiofanana mafy dia izy no alika tsara indrindra nananako ary tsy hanana karazana hafa mihitsy aho alika. Tia mananasy sy voasary izy, halany setroka sy labiera mora vidy — eny, Warsteiner sy Red Stripe ihany no fisotroany ... hafahafa ihany. '
'Rocko, aseho eto amin'ny 5 volana, dia fifangaroan'ny Eng / Am bulldog (taranaka voalohany). Fotsy indrindra izy, misy fehiloha amin'ny lohany, sandriny, lamosiny ary tongony. Manana teboka mainty taonina ao ambanin'ny kibony izy. Ny reniny dia 70-lbs anglisy anglisy madio, raha ny rainy amerikana kosa milanja latsaka ny 80 lbs. Nilaza taminay ny mpiompy, samy tompon'alika roa, fa milanja 90 lbs ny raibeny. !! Amin'ny 5 volana dia efa milanja 50 lbs i Rocko. Tena tia milalao sy be fitiavana izy. Tiany ny mikopaka ary voafehy toy ny zazakely. Tiany ny mandro , ary raha tsy manidy varavarana aho dia mety hataony gaga fotsiny aho amin'ny fitsambikinana! Izy dia manan-tsaina, mahatoky ary mafy loha. Izay tadiaviny ihany no ataony fa tsy inona intsony. Tiany ny sain'ny tsirairay ary milalao tsara amin'ny ankizy sy ny biby hafa. Ny 'rahalahiny' dia fifangaroan'ny Chow ary milalao maraina sy antoandro ary alina izy ireo (na dia mila misimisy eo anelanelany aza i Rocko!) Mihinana be loatra izy, mandrovitra ny tranoko, mitsako ny kiraroko, ary indraindray dia milay loatra, saingy amin'ny faran'ny andro, rehefa mandry eo am-pandriana miaraka aminy aho, mikiakiaka eo anilako, mendrika izany rehetra izany! '
'Amos Moses no mpampijaly ahy ary alika tsara indrindra eto an-tany! Ny reniny dia 100% American Bulldog, mainty mainty ary nilanja 120 pounds. Ny dadany dia 100% anglisy Bulldog ary nilanja 90 pounds. Nipetraka teo amin'ny seza ary tamin'ny 10 volana dia nilanja 90 pounds. Tonga hatramin'ny 120 izy, nefa vaky ny valahany rehefa nanaikitra kamio mivezivezy izy. Sitrana tanteraka izy izao ary milanja 90 pounds. Mbola te hanaikitra ny kodiarana amin'izay mihetsika izy! Ankoatr'izay dia mpametaveta LEHIBE! '
'Amos Moses malaza dia manana ray izay Bulebrog anglisy madio ary Bulldog amerikana ho an'ny reniny. Nahazo an'i Amos tamin'ny fianakaviana iray tany Corning, NY izahay, izay nanana fako kely enina. Nentinay nody izy rehefa feno 7 herinandro izy ary nivadika 9 volana fotsiny ary nilanja 85 lbs Mandeha azy 1-3 kilaometatra isan'andro aho , mamela ny toetr'andro, ary tsy te-hijanona mihitsy izy. Rehefa tafiditra ao anaty isika dia misotro rano be dia be. Mandalo rano 2 litatra isan'andro izy. Izy dia goavambe malefaka ary matahotra ny alokalony. Tsy handratra olombelona mihitsy izy satria tsy voajanahary izany. Voalaza fa alika mpiambina tena izy ary mampatahotra tokoa ny mijery azy. Toy ny an'ny Mastiff ny hodi-kaony ary mampihaino. Tena natahotra izy mora hampiofana ary mbola tsy tratry ny lozam-pifamoivoizana tao an-trano. Tiany ny milalao ny hazavana tamin'ny laser reraka ary tia mamiravira sy manosihosy biby tototry. Ny kilalao squeaker dia tapitra nopotehina tao anatin'ny minitra vitsy, segondra vitsy, ary nasehony tamim-pireharehana taminao tamin'ny vavany mitete ilay squeaker anatiny. Fantany tsara ilay teny hoe 'namaoka' ary hiankohoka izy rehefa avy nisotro mba hahafahantsika manala ny rano be loatra. Hataony mihinana saika na inona na inona ary fifaliana tsotra izao ny fahitana azy. Izay rehetra mahita azy dia raiki-pitia ary te handray azy. Tianay tokoa i Amos ary izy dia ankasitrahana eto amin'ny fianakavianay. '
Amos Moses malaza ho alika kely 7 herinandro
Ny lamosin'i Amos Moizy
Manaova landitra ny Bulldog Amerikanina anglisy amin'ny 6 volana sy 40 pounds eo ho eo— 'Ny reniny dia Amerikanina Bulldog (60 lbs.) Ary ny rainy dia Bulldog anglisy (45 lbs.).'
Jiggly Pop ny EngAm Bulldog toy ny alika kely amin'ny 2 volana
Hijery ohatra misimisy kokoa momba ny EngAm Bulldog
Sarin'i EngAm Bulldog 1
habe sy lanjan'ny mpanondro fohy fohy alemana
spaniel akoho mifangaro poodle
mpiandry alemà greyhound fampifangaroana info
bichon cocker spaniel poodle mifangaro
ohatrinona ny haben'ny fonon'ny laboratoara catahoula
Jack Russell Terrier sy dachshund mifangaro